Codbixinta Scotland waxbaa u dheer! | Awale orcid.org/0000-0002-2014-4023
Dawladnimada casriga ah ee haatan dunida ka hana-qaaday waxay ka dhalatay, waayo-aragnimo ilma-aadam kala dhaxleen mudo dheer oo soo taxnayd tan iyo dawladii ugu horeysay ee Shiinaha 3000 sano ciise hortii. Waxaana culimada taariikhdu aaminsan yihiin inay ahayd markii ugu horeeyey ee Nin iyo Xilka ku haboon la isla doontay. Waxaana tani markhaati u tahay inay bani’aadamku hayaan ku jiro, kaasi oo keenay in uu horumar fiican ka gaadho dawladnimada.
Waxaan maalmahan kala soconay qalabka isgaadhsiinta Codbixinta aayo-ka-tashiga ee Schotland oo ka tirsan Boqortooyada Ingiriiska taasi oo ku qotonta xaqa shucuubtu u leeyihiin aayo-ka-tashigooda, waxaase aniga iiga soo baxday Codayntan oo ku dhamaatay Wada-jirka Boqortooyada Ingiriiska inay ka waynayd arin codbixin gooni isu taag doon ah. U fiirso, tani waa natiijadii codbixinta waad ujeedaa sida ay isugu dhawaadeen. waa maxay casharka kale ee laga baran karaa.
Aragtidayda waxaa halkan ka muuqata inay ahayd fursad ay dib uga wada hadlayeen dawladnimadooda dadka ku nool schotland, isla markaana fursad kale u noqotay hogaamiyayaasha siyaasada ee Ingiriisku inay qorsheeyaan dawladnimo soo jiidata dadka ku nool schotland, taasi oo ay ugu horayso maamul daadajinta. Maxaase u gaar ah habkan ay u dhacday? adiga oo maskaxdana ku haya codayntii Somaliland ay ku go’aansatay gooni isutaaga.
Hogaamiyaha Xisbiga Ed Milliband ayaa is waydiinayay isaga oo dareensan inuu xil ka saaran yahay sababta ay 45% reer schotland u dalbadadeen madaxbanaani mar uu u jeedinayay Khudbad Xubnaha xisbigiisa Shirka Sanadlaha ah Magaalada Manchester.
Dawlada Ingiriisku waa dawlad facwayn, waxay ku dhisan tahay habka loo yaqaan Dimoqraadi oo ah in talada loo daayo dadwaynaha, Dawladuna u adeegto sida ay ku taliyaan. dawladaha talo-maroorsiga ahse uma cuntanto waxaan ahayn inay dadka ku darsadaan duunyadooda oo ay ku naanaysaan guul-wadayaal. (Master and Slave Principle).
Afrika hadaba guud ahaan waxay ididiilo ka dhigatay talaabada mid ka mida Dawladaha quwada wayn leh ay samaysay inay fursad u noqon karto qaar badan oo raba inay gaar uga baxaan dawladaha ay hada ka tirsan yihiin halka qaar hore oo ka baxayna aanay wali helin garawshiiyo caalami ah, kuwaas oo keenay qulqulatooyin galaafta nafaha boqolaal kun oo Afrikaan ah, sida ay ka faalootay wargayska Economist, maqaal ay ugu magac dartay
Maxaynu si nabada ugu dhamayn waynaa inagu?
Burburkii dawlada Maxamed Siyaad Bare, wuxuu fursad u noqday inay 2 qodob oo dawladnimo wanaag ah ay Somaliland ka hirgasho, mida hore waa Xaqa-aayo ka tashiga iyo ta kale oo ah Dawladnimo ay dadku siiyaan awooda oo iyaga u hogaansan taasna waxaa keenaysa doorashooyinka ka hirgalay Somaliland. Si kastaba ha ahaatee, waxaan aaminsanahay dooda ka dhalatay doorashada Scotland waxay fursad fiican u tahay dib u habaynta dawladnimada Ingiriiska. Hogaamiyayaasha siyaasaduna waxay u isticmaali doonaan asaas ay ku dhisaan xidhiidhka dawlada iyo dadwaynaha.